Gumushane တက္ကသိုလ်,7။ စံချိန်စံညွှန်းအပေါ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသင်တန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမူလစာမျက်နှာပိုင်ဆိုင်မှုကို - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ29 GumushaneGumushane တက္ကသိုလ်,7။ စံချိန်စံညွှန်းအပေါ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသင်တန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမူလစာမျက်နှာပိုင်ဆိုင်မှုကို
10 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 29 Gumushane, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
Kose နှစ်အရွယ် Irfan Can အသက်မွေးမှုကျောင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသင်း (လောဒမွို့) "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပညာရေးစံချိန်စံညွှန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ xnumx'nc" ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ကျင်းပသည့်တစ်ဦးဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကိုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။
မဟာဌာနတူရကီ, ကောလိပ်များနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသက်မွေးမှုကျောင်းများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အခန်းကြီးအကြားဘုံမြေပြင်ဖော်ထုတ်နှင့် Gumushane တက္ကသိုလ်ကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့ပါတယ် "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပညာရေးစံချိန်စံညွှန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ xnumx'nc" ဟုအဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များဆုံးဖြတ်ရန်ယခုနှစ် xnumx'nci စည်းရုံး။ ပရိုဂရမ်ကိုတက္ကသိုလ်ကထိက Assoc ၏အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား။ ဒေါက်တာ အလက်ဇန်းဒါး Peker, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၏လေ့ကျင့်ရေးစံနိုင်ရန်အတွက်သူကသူမတက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဖွဲ့စည်း xnumx'nci အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက္ကသိုလ်မှရာအရပ်ကိုယူခဲ့တဲ့ကိုဘယ်လိုပျော်ရွှင်ဟုပြောသည်။
ဒုတိယအဓိပတိတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ Peker ၏အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြီးနောက် ဒေါက်တာ Bahri Bayram ကသူ့မိန့်ခွန်းမှာလုပ်အောက်ပါထုတ်ဖော်ပြောဆို: "ဒီနှစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပညာရေးစံချိန်စံညွှန်း xnumx'nci ၏အဖှဲ့အစညျးကျနော်တို့အလွန်မာနထောင်လွှားခြင်းနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ပညာရေးငါနှင့် II ကိုအတွက်7- နှစ်အရွယ် Irfan Can Kose ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်အသက်မွေးမှုကျောင်း, 2011 အတွင်းတည်ရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်နှင့်အတူဆက်နွယ်။ ကျောင်းသားစားသုံးမှုဆုံးမဩဝါဒပေးခွငျးအားဖွငျ့, ကကဏ္ဍတစ်ခုတက်ကြွလမ်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောလေ့ကျင့်နိုင်ရန်အတွက်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများစတင်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတက္ကသိုလ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကြားလေးနက်သောကွဲပြားခြားနားမှုများပေါ်ပေါက်ရေးကိုတည်ထောင်သူဒါရိုက်တာလုပ်နေတာသောအခါကျွန်တော်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်မွေးကျောင်းအတွက်ကြုံတွေ့ရသည့်ပြဿနာများ၏တဦးတည်း။ သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များအတွက်လက်ရှိအခြေအနေအရသိရသည်သင်တန်းအကြောင်းအရာကျင်းပခဲ့သည်။ ဤပြဿနာကိုဤအဓိပ်ပာယျမှာပျောက်ဆုံးအဓိကအားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာ Mehmet တန်ယာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှအဓိကအားဖြင့်ဆက်စပ်အားလုံးန်ထမ်းမှအကြှနျုပျနှငျ့အကြှနျုပျသအဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၏သင်တန်း, ဒီသဘောပညာရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်အလုပ်အကိုင်များအပေါ်အာရုံနှင့်အတူလေ့လာမှုများအတွက်အဆင့်မြင့်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့လဲအရမ်းကြီးမားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်စင်စစ်, ထိုကဲ့သို့သောပညာရေး-oriented နှင့်ပိုပြီးအကူအညီဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တက္ကသိုလ်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်အသိအမှတ်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်များအနေဖြင့်ဘွဲ့ရတဲ့သူပါရမီကြောငျးသားမြား၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးများအတွက်လောဒမွို့ထက် သာ. ကောင်း၏အရည်အသွေးအလုပ်လုပ်အဖြစ်။ ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အ site ကိုနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအများကြီးပိုပါလိမ့်မည်ရှိရာအမှု၌ရရှိသောရလဒ်များကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏အဖှဲ့အစညျးမှလှူဒါန်းခဲ့သည်ပြီးခဲ့သည့်လောဒမွို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတပါမောက္ခ ဒေါက်တာ နှစ်အရွယ် Irfan Mehmet Kose တန်ယာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်မွေးကျောင်းဒါရိုက်တာပါမောက္ခနိုင်သလား။ ဒေါက်တာ မင်္ဂလာ Ahmet Akyuz, လောဒမွို့အရှေ့ပင်လယ်နက်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လည်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာ ကထိက။ အဖွဲ့ဝင်အလက်ဇန်းဒါး Peker ကျနော်တို့အတိတ်အတူတကွဆောင်တတ်၏အပေါင်းတို့နှင့်တကွကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုငါ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုတင်ပြသောဤအဖွဲ့အစည်းကိုမှလှူဒါန်းခဲ့ကြပါပြီဤအခါသမယပေါ်မှာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်, ငါတို့မွို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေလိုပါသည်။ "
တက္ကသိုလ်ဒုတိယအဓိပတိပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အဆိုပါမိန့်ခွန်းအပြီး Bahri Bayram, Gumushane စက်မှုနှင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းကသမ္မတအစ္စမေးလ် Akcay အဆိုပါ xnumx'nci ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပညာရေးစံချိန်စံညွှန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုသူ Gumushane အတွက်ဖြစ်ဖို့ပျော်ရွှင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Akcay "ကျနော်တို့ခေါင်းစဉ်ထိုက်ဤသုံးပါးမှပေးသောတန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်သကဲ့သို့ငါဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, သင်တန်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ " သူကလှူဒါန်းခဲ့သောသူအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် Maltepe တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Mehmet တန်ယာ, ပုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုန်သွယ်ရေးမပါဘဲမဖြစ်လိမ့်မယ်, ကုန်သွယ်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမရှိဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်မဟုတ်ပါ။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုခငျြကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒအစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုအပေါ်အခြေခံပြီးပိုကြီးတဲ့ရှိပါက ": တန်ယာကသူ၏မိန့်ခွန်းမှာထွက်ထောက်ပြသည်။ ဤသည်အရေးအပါဆုံးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများစက်မှုလုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဦးတည်ချက်အတွက်ကောင်းတစ်ဦးပညာရေးပေးရဖို့ရှိသည်သေချာစေရန်အလို့ငှာကဏ္ဍအတွက်ထားပါ။ အရည်အသွေးဘွဲ့ရ; ဒါပေမယ့်တကအရည်အချင်းပြည့်မီသောပညာရေးနှင့်အတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 16 နှစ်ပေါင်း '' နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေး၏ကွန်ဂရက် '' အဖြစ်လောဒမွို့ကျနော်တို့စည်းရုံးရေးနေကြသည်။ ကျနော်တို့အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်ထက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်စံချိန်စံညွှန်းအခြား။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပညာရေးစံချိန်စံညွှန်း (Les) တူရကီအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလေ့ကျင့်ရေးမှဦးတည်ချက်များကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ Gumushane တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရုံအတွင်းပထမဆုံး 9-10 စက်တင်ဘာလ 2017 Dumlupınar xnumx'nci နေ့စွဲတွင်ဤရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီဖြစ်ရပြီအဖြစ်လောဒမွို့။ အဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏ contents တွေကိုများ၏လိုအပ်ချက်များ (လောဒမွို့) တက္ကသိုလ်ကထိကများနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူများစွာသောလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့်အညီဆုံးဖြတ်ရန်သတ်မှတ်ထားသောအစီအစဉ်နှင့်နိမ့်ဆုံးဘုံနှင့်ဆက်စပ်နေသောအခြေခံပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှ၏အစိတ်အပိုင်းများ။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအနာဂတ်၌ဖွင့်လှစ်နိုင်သည့်အပိုင်းများအတွက်အကြံပြုချက်အဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များ, သင်တန်းခရက်ဒစ်နှင့်ဥရောပချေးငွေလွှဲပြောင်းစနစ်၏ဤအစီအစဉ်များ (ECTS) နှုန်းရွေးကောက်ပွဲကိုအုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်နာရီကဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Gumushane တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ပါမောက္ခစည်းရုံးရေး၌အကြှနျုပျတို့၏အလှူငွေဖြစ်ပါသည် ဒေါက်တာ အာဗြဟံသည် Zeybek, Kose နှစ်အရွယ် Irfan Can အသက်မွေးမှုကျောင်းဒါရိုက်တာ Assoc ။ ဒေါက်တာ ငါ Ahmet မင်္ဂလာ Akyuz နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
အဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် Barbaros Büyüksağnak "Les Current Status" ၏အရေးပါမှုကိုဖော်ပြပြီးနောက်, ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမိန့်ခွန်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပညာရေးစံချိန်စံညွှန်း (Les) အောက်ပါခေါင်းစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပါမောက္ခ၏လောဒမွို့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ Mehmet တန်ယာ, နိုင်ငံတကာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး '' Association ကအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပါမောက္ခများ၏သဘောပေါက်ဖို့အထောက်အကူပြုပေးသော (UND) အရှေ့ပင်လယ်နက်ဒေသကြီးဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဒုတိယသမ္မတပါမောက္ခချုပ်အဗ္ဗဒူလာ Ozer ဒေါက်တာ ဒါဟာ Bahri Bayram ကပြားနှင့်အတူတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲအစီအစဉ်ကိုလာမယ့်စနေနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကျင်းပပြီးနောက် Kose ဒုတိယ session တစ်ခုနှစ်အရွယ် Irfan Can အသက်မွေးမှုကျောင်းများ၏ညီလာခံခန်းမထဲမှာကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးများလောဒမွို့မန်နေဂျာများနှင့်ပညာရှင်များ Gumushane ၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အတူအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Omer Faruk Kose Canpolat နှင့်မြို့တော်ဝန် Turgay Kose Salyazı Kesler ပြီးနောက် - Bayburt လေဆိပ်, ဆောက်လုပ်ရေးသွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်Yıkılmazငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ကုမ္ပဏီအရာရှိတွေကလေယာဉ်ပြေးလမ်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်လုပ်တယ်နေစဉ်ဧရိယာတှငျတှေ့နောက်ဆုံးပေါ်အခွအေနေနောက်ပိုင်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပေါ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရှင်းလင်း၏လုပျငနျးကနေရောက်လာတယ်။ တနင်္ဂနွေအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးများကျင်းပခဲ့ကြသည်မှာ "ခေါင်းစဉ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် Track သင်တန်းနှင့်အတူမိတ်ဖက်တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏အစီအစဉ်ရလဒျစိတ်ပိုင်းဖြတ်" ၏နောက်ဆုံး session ကိုလုပ်လေ၏။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသင်တန်းများအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၏ themes များပေါ်တွင် အခြေခံ. ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Sulaymaniyah, Karaca ဂူနှင့် Torul Glass ကိုကျန်ကြွင်းသောအရပ်မှအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာသူများကိုအဆုံးသတ်ခရီးစဉ်အပြီးတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ "ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောစက်မှုလုပ်ငန်းပေါ်ထွက်လာနှစ်တိုင်း: အာဗြဟံသည် Zeybek အဆိုပါကျင်းပသည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါအကဲဖြတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်အရွယ် Irfan Can အသက်မွေးမှုကျောင်း Kose အရည်အချင်းပြည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ '' ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ် 'နဲ့' စာတိုက်န်ဆောင်မှုများအစီအစဉ် '' အဆင်ပြေလေ့ကျင့်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်လက်သူတို့ရဲ့ပညာရေး။ ပညာရေး၏လယ်ပြင်တွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအသိပညာ၏အစာရှောင်ခြင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းဤအစီအစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်ဘွဲ့ရကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံ၏အမျိုးသားရေးရည်မှန်းချက်နဲ့အညီကျနော်တို့အရည်အချင်းပြည့်ဘွဲ့ရလေ့ကျင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း၌ကြီးသောအောင်မြင်မှုဖမ်းဆီးဖို့အခွင့်အလမ်းများပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု, နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး, နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဤအစီအစဉ်များ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထိုသို့သောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်များရှိသည်သင်တန်းနှင့်ပညာရေးလုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဒီအစီအစဉ်ကိုသင်တန်းများသင်ကြားအတော်လေးကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်ဟာသူတို့ရဲ့ရူပါရုံကိုနှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောသင်ခန်းစာအစီအစဉ်များရှိခြင်းကသဘာဝနှင့်မှန်သည်။ သို့သော်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်လုပ်ကိုင်ဖို့ဘုံအသိပညာနှင့်ဘွဲ့ရကျွမ်းကျင်မှုဆိုတဲ့အချက်ကိုအခြားအရေးပါသောပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသည်ဤအလုပ်ရုံများနှင့်အညီလိုက်နာရလမ်းသင်တန်းရဲ့ contents အားလုံးကိုမိတ်ဖက်ဖန်တီးပါလိမ့်မည်သည့်အစီအစဉ်ကို themes များ။ အဆိုပါထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍထဲမှာ, စီးပွားရေးလောကနှင့်သိပ္ပံများ၏ကမ္ဘာကြီးကြီးမားတဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုရရှိထားသူဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသာရပ်ရွာထဲတွင်ကုန်တင်များ၏အသွင်သဏ္ဌာန်လျှော့ချနေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုရုတ်သိမ်း၏ဤအမြင်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏အရေးပါမှုကိုဤနေရာတွင်ပေါ်ပေါက်။ ကျွန်တော်တို့ဟာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုယ်စားပြုသောအမှုခံရဖို့အလုပ်အမျိုးမျိုးတို့ကို၌ဤအဆုံးမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏အဖွဲ့အစည်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသင်းမှပါမောက္ခမှလှူဒါန်းခဲ့ ဒေါက်တာ Mehmet Kose တန်ယာနှစ်အရွယ် Irfan Can အသက်မွေးမှုကျောင်းဒါရိုက်တာ Assoc အထူးသဖြင့်။ ဒေါက်တာ မင်္ဂလာ Ahmet akyüz, လက်ထောက်။ ဒေါက်တာ အလက်ဇန်းဒါး Peker နှင့်စည်းရုံးရေးကော်မတီအားလုံးအဖွဲ့ဝင်များ, ငါတို့လှူဒါန်းခဲ့သူကိုလူတိုင်းကကျေးဇူးတင်ငါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ပိုကောင်းမဟုတ်ပါဘူးအလိုရှိ၏။ "
Bogazici တက္ကသိုလ်လျှပ်စစ် Mobility ကို Make အပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Host မှ 25 / 11 / 2018 စွမ်းအင်မူဝါဒ (EPAM) နှင့်လျှပ်စစ် Mobility ကိုဥရောပအစည်းအရုံးများအတွက် Bogazici တက္ကသိုလ်သုတေသနစင်တာ (Avaric) Electro-Mobility ကိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Valerie Yerlici နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. Bosphorus တက္ကသိုလ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 23 ကုမ္ပဏီ၏သမိုင်းအတွက်ဦးဆောင်အမည်များ 2018 နှင့် 17 လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်စျေးကွက်အပေါ်အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအသင်းအဖွဲ့ပါဝင်မှုပြသခဲ့သည်။ တူရကီအများအပြားသိပ္ပံနည်းကျစည်းကမ်းရှုထောင့်အပေါ်သုတေသနနှင့်လေ့ကျင့်ရေးစည်းမျဉ်းများအဖြစ်အမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတည်ထောင်ခြင်းရည်ရွယ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပြုပါကျော်, စွမ်းအင်မူဝါဒနှင့်စျေးကွက် Bogazici တက္ကသိုလ်စွမ်းအင်ပေါ်လစီသုတေသနစင်တာကိုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဒေတာများစွမ်းရည်ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့ထူထောင်စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှစွမ်းအင်မူဝါဒများသိပ္ပံနည်းကျထောက်ခံမှုပေး ...
GESOB သမ္မတ, Gumushane တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ပါမောက္ခ Black က Giresun တှငျကငျြးပခဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကနေမီးရထားလမ်းဝေဖန် ဒေါက်တာ Ihsan Gunaydin, ထိုရှုံ့ချခဲ့သည်။ 01 / 03 / 2012 Giresun Tradesmen နှင့် Giresun ကျင်းပတဲ့ရထားလမ်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်ဖန်ဆင်းတော်မူသောလက်မှုပညာသည်ကုန်သည်များကိုပြည်ထောင်စုသမ္မတ Ali Kara-, Gumushane တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ Ihsan Gunaydin ဝေဖန်လိုက်သည်။ SERT RESPONSE GUNAYDIN ​​ထံမှ KARA! မြေယာ, "အိုပညာရှင်, လူကြီးလူကောင်းပညာရှင်, သင်သင်ထားတဲ့ပြဿနာအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်müneccimiကိုမသိကြသလောပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ချက်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုတွေ့မြင်ရှိရာတဦးတည်းကိုသိ?" သူကမေးတယ်။ မိမိအကြေညာချက်, Gumushane တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်အတွက်အနက်ရောင်, ဒေါက်တာ Ihsan Günaydin, Giresun ကျင်းပတဲ့ရထားလမ်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် "ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ပညာရှင်များမသွားဘဲ Giresun ကျင်းပခဲ့သောအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားမခံရပေမယ့်။ ကျနော်တို့နေတဲ့တက္ကသိုလ်အဖြစ်သူမ၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေးသောအခါသိပ္ပံနည်းကျအဖြစ်ထွက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ...
TCDD Eskişehirပညာရေးစင်တာတစ်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် 29 / 09 / 2012 မီးရထားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဂ္ဂ (UIC) ကာတာနိုင်ငံ 10 အတွက်လုပ်ဆောင်တယ်။ ဒေသတွင်းလေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာညီလာခံ (UIC-Rama) နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမီးရထားသင်တန်းကျောင်း (အရှေ့အလယ်ပိုင်းမီးရထားသင်တန်း Center- တစ်ဦးက mertcan) TCDD Eskişehirပညာရေးစင်တာတစ်ခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပလိမ့်မည်ဟုသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ TCDD နှင့် UIC mertcan က "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်း" နှင့်အတူပူးပေါင်းအောက်မှာဖွဲ့စည်းနှင့် 01-02 2012 အောက်တိုဘာလတွင် Eskisehir အတွက် "High Speed ​​ကော်မတီအစည်းအဝေး" ကိုဤအစည်းအဝေးအပြိုင် Anemon ဟိုတယ်၌ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအိပ်ဆောင်၏ပထမနေ့၌ xnumx't "High Speed ​​ကော်မတီအစည်းအဝေး" ကိုစတင်မည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်းမှာအောက်တိုဘာလ 1 2012 တနင်္လာနေ့ ...
Gümüşhane-Erzincan, Erzincan-Trabzon နှင့်ပြုသောအမှုခံရဖို့ဝန်ကြီးဌာနကမှတ်ပုံတင်ခဲ့သောGümüşhane-ထရီပိုလီမီးရထားလမ်းစီမံကိန်း 08 / 02 / 2012 Karadeniz နည်းပညာတက္ကသိုလ် (KTU), ဌာနအင်ဂျင်နီယာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနဥက္ကဋ္ဌပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Fazil သံမဏိ, ပို့ဆောင်ရေး, ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ Trabzon နှင့် Erzincan ကတည်ဆောက်ပင်လယ်ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Erzincan-GümüşhaneGümüşhane-ထရီပိုလီမီးရထားလမ်းစီမံကိန်းကြောင့်ဝန်ကြီးဌာနကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်မှတ်ပုံတင်ပြီးကဆိုသည်။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Fazil သံမဏိ, Trabzon သတင်းစာဆရာများအသင်းကတစ်ဦးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်အတွက်ဒီဇင်ဘာလ 25 2011 န်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်စာတစ်စောင်ရေးသားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ သံမဏိ, "Trabzon Trabzon-Erzincan ရထားလမ်းစီမံကိန်းတွင်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုကyaptırılıp7ဘီလီယံကိုပေါင်မှပေးအပ်ခဲ့သည့်စာ, အလွန်မှားယွင်းနေသည်, ထိုနိုင်ငံ၏အရင်းအမြစ်များကိုဖြုန်းတီး ...
AK ပါတီလက်ထောက် Gumushane Superior ။ "Gumushane ခုနှစ်တွင်မီးရထားလမ်းကြောင်းကနေသွားတော်မဆိုအခက်အခဲတွေဖြစ်ပျက်ဆိုလို။ 12 / 02 / 2012 AK ပါတီလက်ထောက် Feramuz သာလွန် Gumushane, Trabzon သူ Gumushane အဆိုပါမီးရထားလိုင်းဖြတ်သန်းအတွက်မည်သည့်ပြဿနာမျှရှိသည်မဟုတ်-ထရီပိုလီ-Erzincan-Gumushane ကဆိုသည်။ ထူးချွန်, ရထားလမ်း၏လမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. မိမိအစာဖြင့်ရေးသားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်, Trabzon တစ်ဦးပါမောက္ခကကြေညာချက်ထဲမှာဖန်ဆင်းထားသည်အတွက်ပါမောက္ခဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာစေလွှတ်တော်မူ (KTU) Karadeniz နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ "ပြန်ပြောပြ။ ဤအစီရင်ခံစာကိုဝန်ကြီးဌာနမှတင်သွင်းထားပြီး On-demand လိုအပ်သောယူဆ။ သို့သော်ကပြောပါတယ် Gumushane အတွက်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့အခွင့်, တာယာများ၏လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်းမည်သည့်အခက်အခဲမဖြစ်စေလိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ ရင်းမြစ်: ငါ့အ http://www.haberler.co
7 ။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပညာရေးစံချိန်စံညွှန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
Kose နှစ်အရွယ် Irfan Can အသက်မွေးမှုကျောင်း
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: Afyon ၏ Milne အားဖြင့်စက်တင်ဘာလ 17 1919
Bogazici တက္ကသိုလ်လျှပ်စစ် Mobility ကို Make အပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ Host မှ
GESOB သမ္မတ, Gumushane တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ပါမောက္ခ Black က Giresun တှငျကငျြးပခဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကနေမီးရထားလမ်းဝေဖန် ဒေါက်တာ Ihsan Gunaydin, ထိုရှုံ့ချခဲ့သည်။
Gümüşhane-Erzincan, Erzincan-Trabzon နှင့်ပြုသောအမှုခံရဖို့ဝန်ကြီးဌာနကမှတ်ပုံတင်ခဲ့သောGümüşhane-ထရီပိုလီမီးရထားလမ်းစီမံကိန်း
AK ပါတီလက်ထောက် Gumushane Superior ။ "Gumushane ခုနှစ်တွင်မီးရထားလမ်းကြောင်းကနေသွားတော်မဆိုအခက်အခဲတွေဖြစ်ပျက်ဆိုလို။
Trabzon-Erzincan ရထားလမ်းGümüşhane-Erzincan နှင့် Gumushane-ထရီပိုလီရထားစီမံကိန်းများ4အယူခံအတွက် EIA ကိုအစီရင်ခံစာဆီသို့ရောက် လာ. ,
Erzincan နှင့် Gumushane-Giresun ကျင်းပ (ထရီပိုလီ) -Trabzon မီးရထားလိုင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
အီးယူစံချိန်စံညွှန်းအတွက် Elazig အတွက်ယာဉ်မောင်းသင်တန်း
အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲရထားလမ်းစီမံကိန်း၏ကောက်ချက်ကစီစဉ် Giresun တက္ကသိုလ်နှင့် Giresun အဆိုပါ TSO များကကြေညာခဲ့သည်။